China Scraper conveyor fanamboarana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny conveyor scraper dia misy ampahany amin'ny loha, vatan'ny tanky afovoany, ampahany amin'ny rambony, rojo fitaterana scraper, fitaovana fampandehanana ary fametahana torimaso torimaso. Rafitra mihidy tanteraka, tsy misy famoahana fitaovana mandritra ny fandidiana; rojo conveyor dia mandray rojo rojo, endrika fisehon'ny rojo tokana; ny fanafarana sy fanondranana fitaovana, fampitana halavana dia azo namolavola mora foana sy nalamina mifanaraka amin'ny fepetra takiana. Ny fitaovana dia miditra ao amin'ny farany ambany amin'ny tank amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo fampiasa amin'ny fitaovana, ary ny fitaovana dia entina mitohy hatrany amin'ny seranan-tsambo mankany amin'ny seranan-tsambo amin'ny alàlan'ny rojo conveyor scraper izay manohy miasa hatrany amin'ny rambony ka hatramin'ny loha. Afaka mahatsapa famahanana teboka marobe sy famoahana teboka marobe izy io. Ny fitaovana fanitsiana tsorakazo dia napetraka eo amin'ny rambon'ny masinina mba hanitsiana ny fihenan'ny rojo mampita, izay mitazona hatrany ny toe-javatra misy fihenjanana mandritra ny fandidiana, ka ny fitaovana dia ao anaty fanjakana miorina maharitra.
Ny tombony azo amin'ny conveyor scraper dia noho ny fitsipika miasa. Noho ny fikororohana anatiny sy ny fanerena ny fitaovana, ny fivezivezena ny rojo fitaterana dia mampitombo ny tsindry anatiny amin'ny fitaovana ao anaty lavaka sy ny fifandirana anatiny eo anelanelan'ny sombiny. Rehefa ny hery fifandonana anatiny eo anelanelan'ny sosona ara-nofo dia lehibe kokoa noho ny herin'ny fikorontanana ivelany eo anelanelan'ny fitaovana sy ny rindrin'ny alàlan'ny alàlan'ny rindrina, ny fitaovana dia mivezivezy miaraka amin'ny rojo conveyor toy ny rano Ny fihaonan'ny sakan'ny slot dia mihaona.
Izy io dia afaka mamorona fikorianan'ny fitaovana milamina. Ny toro lalana mandroso, ny haitao tsara ary ny teknolojia famokarana manome fahombiazana tsara ho an'ity andian-vokatra ity.
Endri-javatra lehibe amin'ny mpampita hafatra:
1. Firafitra mety, famolavolana tantara, haitao mandroso ary andiany feno.
2. casing feno, rakotra famehezana tsara, fampandehanana ary fandidiana.
3. Ny maodelin'ny fampiasana dia manana tombony amin'ny fitsitsiana vola, fitsitsiana herinaratra sy faharetana, tsy fikojakojana, mampihena ny fihinanana ary mampitombo ny tombom-barotra.
4. Ny conveyor dia manana fahaiza-mampita kely amin'ny 600 m3 / h, ny fahafahan'ny scraper mampita.
5. Azo ampidirina ny fanafarana sy fanondranana azo ovaina, avo, tany, lavaka, marindrano, fiakarana (≤ 15 °). Ny halavan'ny conveyor Fu scraper dia azo noforonina araky ny mpampiasa.
6. Lava ny androm-panompoana. Ny rojo conveyor dia vita amin'ny vy vy amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana mandroso. Ny fiainam-panompoana mahazatra dia mihoatra ny 5 taona, ary ny fiainana an-tsarimihetsika amin'ny rojo dia mihoatra ny 2-3 taona.
Conveyor Scraper dia mpanera mitohy amin'ny fampitana vovoka sy fitaovana ara-materialy. Ny zava-bitany dia tsara kokoa noho ny conveyor visy sy ny conveyer scraper. Izy io dia fitaovana fampitaovana vaovao tsara amin'ny metallurgy, indostrian'ny simika, fitrandrahana, akora fananganana, fanodinana varimbazaha ary indostria hafa. Mpitondra rojo Fu dia manana fahaiza-mampita lehibe, izay mamela fitaovana marobe hoentina amina toerana kely.
Manaraka: Mpitafa visy
Mpanamboatra Conveyor mpandevina